Chine Masirabe fitotoana vera tavoahangy misy tavoahangy vita amin'ny menaka Fangaro sy mpanamboatra | Chuancheng
Sakafo masirasira fitotoana tavoahangy misy tavoahangy misy menaka vera sy stainless vy
Namboarina avy amin'ny fitaratra be kalitao avo be, ary manasongadina kristaly maloto, mpanilihana tavoahangy misy rivotra, ary manondraka fantson-tsolika miaraka amin'ny tadiny famotsorana entona mivoaka.
Namboarina avy amin'ny vy vy avo lenta miaraka amina fitaratra, vy miorim-bolo mitana ny vatolampy dia misoroka ny fisarahana.
Mijery sy mahatsapa ny trano fisakafoanana mahazatra sy kanto, manome alalana ny fandatsahan-tsolika sy ny vinaingitra amin'ny fandatsahana mora ary ny kely indrindra amin'ny fandaniana azy.
Ity tavoahangy vera ambony ity dia tsara ampiasaina amin'ny ranom-boankazo, menaka, menaka, vinaingitra, divay mahandro, saosy ary maro hafa.
fampiasana menaka, vinaingitra
fanontam-pirinty fanaovana pirinty vita piravaka, sns
fahafahana 200ml, 300ml
famantarana famantarana ny mpanjifa azo ekena
ora nanomezana ao anatin'ny 30 andro
santionany 1.free fo efa misy sample2.sample ora dia 7-10 andro. Ho an'ny santionany amin'ny famolavolana ho an'ny mpanjifa, ny vidin-tsolika dia USD100-200, ny vidin-tsolika dia afaka mamerina indray mandeha rehefa manome baiko ny fihaonanacan amin'ny MQQ amin'ny ankapobeny.
MITADIAVITRA NY OIL ARY VINAGAR DISPENSER - Fivarotana menaka oliva sy vinaingitra misy menaka tsy misy menaka mikotrana sy miakanjo.
TAM-PIVAVAHANA MASINA TSY MISY ATAO - Noho ny famolavolana tsy misy menaka azy io, ny mpanentana menaka oliva dia manjary mora tokoa ny manampy menaka na vinaingitra amin'ny lovia rehetra! Ankoatr'izay, ny endri-javatra tsy misy menaka mandoto dia manome antoka fa mijanona ho madio ny lakozia anao.
MPANJAKA FAMPISORANA FAMPISORANA FAMPISORANA - Fototra maimaimpoana misy menaka tsy misy BPA dia azo diovina amin'ny rano mafana; Ny tavoahangy famoahana fitaratra dia azo antoka amin'ny fanasana vilia
FAHAGAGANA VERSATILE - Tsara be amin'ny ankamaroan'ny karazan-diloilo toy ny vinaingitra, saosy, na rano aza izany. Ho tian'ny vahiny ny mampiasa an'ireny sambo milay ireny
MITADIAVITRA TANANA VONDRINDRA sy VINEGAR SET dia tonga ao anaty boaty fanomezana izay mahafaly azy amin'ny fametrahana tsiky eo amin'ny tavan'ny olona rehetra; na amin'ny krismasy, mpivady trano, mariazy na tsingerin-taona nahaterahana, ny safidy faran'izay mavokely balsamic no safidy tsara
Previous: napetraka miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana amin'ny menaka oliva feno tavoahangy oliva
Manaraka: Tavoahangy menaka
Jiro tavoahangy Oliva mora
Tavoahangy vera-menaka oliva
Tavoahangy misy menaka oliva Oliva
Tavoahangy misy ny tavoahangy solika
Ranomaso boribory henjana vita amin'ny tantaram-pitondran-tantely miaraka amin'ny ...